သဘင်စုံခံဆဲမို့၊ လွမ်းရန်ဖွဲ့ သည်ချိန်ကို၊
၀ါခေါင်လသည် မြန်မာများ၏ ငါးလမြောက်ဖြစ်ပြီး မိုးဥတုတွင်ပါဝင်ကာ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လ၌ ကျရောက်သည်။ မိုးများစွာ ရွာသွန်းသော လဖြစ်၍ မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေတို့ တိုးကာ ကမ်းလုံးပြည့် လျှံတက်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် "၀ါဆိုဝါခေါင်ရေဖောင်ဖောင်" ဟု ပညာရှင်များက စာဖွဲ့ကြသည်။
အခါတစ်ပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုလ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ ထိုစဉ် အခါဝယ် အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ဘေးအန္တာရယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဆွမ်းအလှူရှင်များသည် တစ်ကျောင်းလုံးရှိ သံဃာတော်များကို လှူဒါန်းရန် အခက်အခဲရှိနေ၍ မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ထားကြရာ ဘုရားရှင်က စာရေးတံမဲချ၍ လှူဒါန်းစေခဲ့ရာမှ စာရေးတံမဲပွဲတော် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ရှေးမြန်မာများက ၀ါခေါင်လတွင် သံဃာတော်များ စုဝေးတည်ရှိ ၀ါကပ်နေချိန် ဆွမ်းကိစ္စ လွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာရေးတံမဲပွဲတော်ကို ၀ါခေါင်လတွင် ကျင်းပခဲ့ဟန်တူပေသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးတံမဲပွဲသည် ၀ါခေါင်လ၏ ရာသီပွဲတော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
It is the fifth Myanmar month. It is in July-August, the rainy season, when rivers are in spate.
In the time of Buddha, when the Lord was staying at Weluwun Monastery in Yazagyo, some disciples supplicated to him the matter of individual disciples having some difficulty to donate meals and alms for all the Sangha at the monastery at the same time, whereuponBuddha laid downaway of disciples drawing lots to determine which monk to offer meals and alms.
Thus began the practice at the time of the year to hold lot-drawing offerings of meals and alms to the Sangha, although the exact time for such offerings is not definitely prescribed.
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, July 28, 2009
ညခင်း July 28, 2009 at 3:08 PM
စာရေးတံ အလှူပွဲ ခဲလို့ညံ၊
ဂျပန်ကောင်လေး July 28, 2009 at 3:52 PM
အင်း..ရာသီဖွဲ့လေးကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ...
မောင်ကောင်း July 28, 2009 at 4:52 PM
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အရေးအသားနည်းတာ တွေ့ရပါတယ်.. အစ်မခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်တစားရေးသားပေးတဲ့အတွက်လည်း သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ... စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ... အစ်မ
မြစ်ကျိုးအင်း July 28, 2009 at 11:12 PM
တွေကို အစဉ်မပြတ် တင်ပေး နေတာ ချီးကျူးမိပါတယ်.။
မီးတောက် July 29, 2009 at 10:58 PM
ကဗျာလေးကို ခံစားရင်း မှတ်သားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
စည်သူ July 30, 2009 at 3:37 PM
အခုမှပဲ စာရေးတံမဲပွဲကို သတိရမိတော့တယ်
အခုလို ဘာသာရေးလဲပါတော့လေ ဖတ်လိုက်တ်ာနဲ့
ဝါဆိုဝါခေါင် ရေဖောင်ဖောင် လို့ပဲ ကြားဖူးတယ်။ ခုလိုကဗျာတော့ ခုမှပဲ ဖတ်ဖူးတယ်။